၂၀၂၀ ဇူလိုင်လ ၁ ရက်နေ့ထိုင်းလေကြောင်းလိုင်းများ ပြန်ဖွင့်ပြီ (ဘယ်သူတွေသွားလာနိုင်သလဲ) – Myanmar Live
June 30, 2020 June 30, 2020 - by peeraporn y.
၂၀၂၀ ဇွန်လ ၂၉ ရက်နေ့က ထိုင်းနိုင်ငံ လေကြောင်း ပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာနမှ ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းသို့ ဝင်-ထွက် သွားလာခွင့်များကိုကြေညာခဲ့ပါတယ်။
ထိုင်းနိုင်ငံဟာ ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါကူးစက်ရောဂါကြောင့် ၂၀၂၀ မေလ ၃ ရက်နေ့ကစပြီး ယနေ့ထိ ပြည်တွင်းပြည်ပ လေကြောင်းလိုင်းများကို ခေတ္တရပ်နားထားခဲ့ရပါတယ်။ လက်ရှိအခြေအနေမှာတော့ ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းရောဂါ ကူးစက်သူဦးရေနည်းလာတာကြောင့် ထိုင်းကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ချမှတ်ထားတဲ့စည်းကမ်းများနှင့်အညီ အလုပ်အကိုင်အချို့နဲ့ ပြည်တွင်းခရီးသွားကဏ္ဍတွေကိုပါ ဖွင့်လှစ်လာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ ထပ်မံပြီးထိုင်းအစိုးရမှ ၂၀၂၀ ဇူလိုင်လ ၁ ရက်နေ့ကစပြီး ပြည်တွင်းပြည်ပလေကြောင်းလိုင်းတွေပြန်လည်ဖွင့်လှစ်သွားမှာဖြစ်တာကြောင့် ဘယ်လိုစည်းမျဉ်း စည်းကမ်းတွေချမှတ်ပြီး လာကြောင်းလိုင်းတွေကိုဖွင့်လှစ်သွားမယ်ဆိုတာ စုစည်းတင်ပြလိုက်ပါတယ်။
၁. ထိုင်းနိုင်ငံ လေကြောင်း ပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာန မှ ခွင့်ပြုချက်ရယူပြီးမှသာလျင် ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းရှိ လေဆိပ်များသို့ ပြည်တွင်း-ပြည်ပလေကြောင်းလိုင်းများဆင်းသက်နိုင်မည်။ ခွင့်ပြုချက်တောင်းခံနိုင်သည့် အဘက်ဘက်ဆိုင်ရာ လေယာဉ်များ
– အစိုးရဌာနအသီးသီးမှ အသုံးပြုနေသည့်လေယာဉ်
– ပျံသန်းနေစဉ်စက်ပစ္စည်းနှင့်နည်းပညာချို့ယွင်းမှုကြောင့်ဆင်းသက်လိုသည့်လေယာဉ် (ခရီးသည်များကိုဆင်းခွင့်မပြု)
– ကိုဗစ်-၁၉ အရေးပေါ်လူနာသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး/ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအကူအညီပေးသည့်လေယာဉ်
– နိုင်ငံတွင်းပိတ်မိနေသည့်နိုင်ငံခြားသားများ နေရပ်ပြန်ရန်ခွင့်ပြုချက်တောင်းခံလာသည့်လေယာဉ်
၂. ထိုင်းနိုင်ငံ လေကြောင်း ပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာန မှ ခွင့်ပြုချက်ရယူပြီးမှသာလျင် ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းရှိ လေဆိပ်များသို့ ပြည်တွင်း-ပြည်ပလေကြောင်းလိုင်းများဆင်းသက်နိုင်မည်။ ခွင့်ပြုချက်တောင်းခံနိုင်သောသူများ
– မဖြစ်မနေနိုင်ငံရပ်ခြားသို့သွားလာရမည့်သူများ (အစိုးရမှဖိတ်ခေါ်ထားသည့်သူ/စေလွှတ်သောသူများ)
– ထိုင်းနိုင်ငံသားမဟုတ်သောသူ သို့သော်ထိုင်းနိုင်ငံသား၏အိမ်ထောင်ဖက်၊ မိခင်၊ သားသမီး
– ထိုင်းနိုင်ငံသားမဟုတ်သောသူ သို့သော် ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းနေရာထိုင်ခင်းအတည်တစ်ကျရှိသူ ထိုင်းအစိုးရမှထုတ်ပေးထားသည့် အထောက်အထားကိုင်ဆောင်ထားသောသူ
– ထိုင်းနိုင်ငံသားမဟုတ်သောသူ သို့သော် ထိုင်းအစိုးရမှထုတ်ပေးထားသည့်အလုပ်ပါမစ်ကိုင်ဆောင်ထား သည့်သူ
– ကုန်ပစ္စည်းတင်ပို့သူ (ကာလတို)
– ပျံသန်းမည့်လေကြောင်းအချိန်အတိအကျရှိသူ လေယာဉ်မှုး/လေယာဉ်မယ်များ
– ထိုင်းနိုင်ငံသားမဟုတ်သည့် ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းစာသင်ကြားနေသည့်သူ ကျောင်းနှင့်ပတ်သက်သည့်ကိစ္စ ရပ်များဖြင့် မဖြစ်မနေခရီးသွားရမည့်သူများ
– ထိုင်းနိုင်ငံသားမဟုတ်သည့် ထိုင်းနိုင်ငံတွင်းဆေးကုသရန်အတွက် သွားလာရမည့်သူများ (ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါမဟုတ်သည့်လူနာ)
– ၂ နိုင်ငံဆိုင်ရာ သံအရာရှိများ၊ စီးပွားရေးသမားများ၊ ၂ နိုင်ငံဆိုင်ရာအစိုးရဌာနများတွင်လုပ်ကိုင်နေသည့် သူများ
– ထိုင်းနိုင်ငံသာမဟုတ်သည့် ၂ နိုင်ငံသဘောတူစာချုပ်ဖြင့် ထိုင်းနိုင်ငံသို့လာရောက်မည့်သူများ
ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်း ၂၀၂၀ ဇူလိုင်လ ၁ ရက်နေ့မှစပြီး လေကြောင်းဖြင့်ဝင်ရောက်လာမည့်သူများအနေဖြင့် ထိုင်းကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ချမှတ်ထားတဲ့စည်းကမ်းချက်များကို မဖြစ်မနေ လိုက်နာရမှာဖြစ်ပြီး ထိုင်းအစိုးရမှ ချမှတ်ပေးထားတဲ့ ကွာရန်တင်းစင်တာများမှာ သတ်မှတ်ထားတဲ့ရက်အပြည့်နေပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။
အချက်အလက်နှင့်ဓာတ်ပုံများအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည် : Thairath
Previous Article ၇ ရက်သားသမီးဗေဒင်ဟောစာတမ်း ၂၀၂၀ ဇွန်လ ၂၉ – ဇူလိုင်လ ၅ ရက်ထိ
Next Article ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားတွေလုပ်ကိုင်နိုင်မယ့် အလုပ်အကိုင်အသစ်ထိုင်းအစိုးရမှထုတ်ပြန်
About peeraporn y.
View all posts by peeraporn y. →